I-Ultrasonics ekucwaningweni kwe-Virus - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonics ekucwaningweni kwegciwane
I-Ultrasonic lysis kanye nokukhishwa kuyindlela ethembekile futhi yesikhathi eside esungulwe yokuphazamiseka kwamaseli nokukhululwa okulandelayo kwamagciwane, amaprotheni egciwane, iDNA, ne-RNA.
I-Ultrasonics kuCoronavirus Research
Ukukhishwa kwamagciwane kusuka kwizicubu zezitho kuyisinyathelo sokulungiselela isampula ngaphambi kokuhlaziya leli gciwane (isib. I-nucleic acid, i-capsomeres, i-glycoproteins). I-Ultrasonic homogenisation iyindlela esheshayo, elula futhi evuselelayo yokulungiswa kwesampula efana nokuxubana kwezicubu, i-lysis, ukuphazamiseka kwamangqamuzana, ukukhishwa kwento ebaluleke kakhulu kanye nokuhlukaniswa kwe-DNA ne-RNA.
Ukulungiswa kwesampula ye-Ultrasonic isinyathelo esivamile ngaphambi kokuphendula kwe-polymers chain reaction (PCR).
Izicelo ze-Ultrasonic Virus
ukuhlolwa kwamangqamuzana ukuze kukhishwe amagciwane kuzicubu zomzimba nezitokisi
okusabalalisa amaqoqo egciwane
ukugunda / ukuqhekeka kwe-DNA ne-RNA
I-Ultrasonics for Vaccine Production kanye ne-Antiviral Drug Fomula
Ukuze uthole imininingwane engaphezulu ngemikhiqizo yokugoma ye-ultrasonic, chofoza lapha!
Izithwali Zezidakamizwa ZaseNano
Ama-Nano-Sized Drug Delivery Systems asetshenziswa ngempumelelo ukuletha isithako esisebenza ngamakhemikhali kumaseli, lapho umuthi wemithi ungayifaka imiphumela yaso. Ama-nano-carriers ajwayelekile emithi yokwelapha I-Nano-Emulsions, Liposomes, cyclodextrin complexes, i-polymeric nanoparticles, i-nanoparticles ye-inorganic kanye nemithambo ye-viral viral.
I-Ultrasonic emulsation kanye nokuhlakazeka kuyindlela esungulwe kahle yokukhiqiza ukwakheka okuthuthukile kwe-nano njenge-nano-emulsions, liposomes, cyclodectrin complexes, kanye nezinhlayiya ze-nano-eg (isib. Nanoparticles ye-msingi-igobolondo) egcwele izinto ezi-bioactive.
Ama-Ultrasonic processors weSeli Lysis kanye ne-Extraction
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlobo eziningi zezinhlelo ze-ultrasonic zokuqanjwa kwamasampula amancane kakhulu weebhu phezulu kanye nokucubungula amanani amakhulu kakhulu ngezinga lezimboni.
Ama-ultrasonicators ethu ahlola ubuchwepheshe eza emabangeni ahlukahlukene wamandla ukuqiniseka ukuthi singakuncoma idivaysi efanelekile yohlelo lwakho lokusebenza. Isibonisi esibanzi sezesekeli ezifana nama-sonotrodes osayizi nobukhulu obuhlukahlukene, amaseli okugeleza nokuphendula ngosayizi ohlukahlukene namajometri nokunye okungeziwe kuqinisekisa ukuthi ungaseka ukuphazamisa iseli yakho ye-ultrasonic ukuze usebenze kahle kakhulu ngenqubo kanye nokududuzeka komsebenzisi.
Umklamo oyingqayizivele we-ultrasonic wokulungiselela isampula I-VialTweeter. I-Hielscher VialTweeter ivumela ukuthi kubhekwe amabhubhu angafika kwabayi-10 (isib. Amashubhu we-Eppendorf, amashubhu we-microcentrifuge njll) ngasikhathi sinye ngaphansi kwezimo ezifanayo. Amagagasi amakhulu e-ultrasonic adluliswa ngokusebenzisa izindonga ze-tube, ukuze kungcoliswa ukungcoliswa nokulahleka kwesampula. The I-VialTweeter uhlelo oluhlanganisiwe lwe-ultrasonic, olungasetshenziswa kunoma yikuphi ukubekwa kwelabhoratri. Izinzuzo zalo ezinkulu wukulawulwa okuqondile kwamapharamitha enqubo, ukuzalwa kabusha, ukuphathwa kanyekanye kwezinhlobonhlobo eziningi ngaphansi kwezimo ezifanayo ngaphandle kokungcoliseka kanye nedatha ezenzakalelayo ye-SD-Card.Ukuqina kwemishini ye-Hielscher ka-Hielscher kuvumela okungu-24 Ukusebenza okungu-7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwa kakhulu.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonicators
Onke amayunithi e-Hielscher ultrasonic akhelwe ukusetshenziswa kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ogcwele. Ukwethembeka nokuqina kwe-Hielscher ultrasonicators kuqinisekisa ukuthi ungacubungula izinto zakho ngokusebenza kahle kokuthola umphumela oyifunayo. Ukulungiswa kwemvamisa yethu ezenzakalelayo kuqinisekisa ukusebenza ngokuqhubekayo kumamephu akhethiwe. Ukuqiniswa komugqa kwenza kube lula ukukala inani lamavolumu enqubo ephezulu kanye nemiphumela yenqubo efanayo ngaphandle kobungozi.
Kusuka kuma-watts angama-200 kuya phezulu, wonke amasistimu ethu e-ultrasonic eza ngesibonisi sokuthinta ngombala, ukulawulwa kwedijithali, ikhadi le-SD elakhelwe ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo, izinga lokushisa elinamandla kanye nezinzwa zokucindezela okukhethwa kukho,
Amandla aphezulu we-homogenizer ephezulu I-Lab kuya umshayeli futhi izimboni zezimboni.
Ukufakwa kweVitamin C Ukwelashwa Kwe-Pneumonia Eqinile 2019-nCoV: Isivivinyo Somtholampilo Ongahleliwe.
Amakhemikhali Ahlanganiswe eLipid Nanoparticles nge-Ultrasonics
Igama elithi coronavirus lakhiwa lonke igatsha lesihlahla somndeni samagciwane kubandakanya nezifo ezibangela izifo ngemuva kwe-SARS (isifo sokuphefumula esibuhlungu kakhulu), i-MERS (Middle East respiratory syndrome) phakathi kokunye okuhlukahlukene. Ukukhuluma nge-“coronavirus” futhi kubhekisele kuhlobo lwegciwane oluyingozi kungafaniswa nokusho ukuthi “izilwane ezincelisayo” lapho kusho ukuthi “ibhere elimazayo”. Kuyinto eqondile kwezobuchwepheshe, kepha ayicacanga.
Igciwane kuyinhlayiya encane yokutheleleka edinga iseli eliphethe ukuze liziphindaphinde. Amagciwane ahlasela amangqamuzana aphilayo esitho, aqala ezilwaneni nasezitshalweni kuya ezinhlayiyeni ezingamagciwane, kufaka phakathi amagciwane kanye ne-archaea.
Izimo Zamagciwane, Izibalo Nezinhlobo
Ngokuvamile, amagciwane amancane kakhulu kunamagciwane. Iningi lamagciwane elifundwe kuze kube namuhla linobubanzi phakathi kwama-nanometer angama-20 kuye kwangama-300. Njengoba iningi lamagciwane liyizinhlayiya zemizuzu enjalo, imicroscope yokukhanya ayinakho ukukhulisa okwanele ukubenza babonakale. Ukubona nokutadisha ama-virus, ukuskena nokuthumela ama-microncopes e-elektroni (i-SEM ne-TEM, ngokulandelana) kuyadingeka.
Inhlayiyana ye-virus ephelele ibizwa ngegciwane. I-virion enjalo inomgogodla ongaphakathi we-nucleic acid, ongaba yi-ribonucleic noma i-deoxyribonucleic acid (RNA noma iDNA). I-nucleic acid izungezwe yigobolondo elingaphandle lokuzivikela elibizwa nge- capidid. I-capsid yenziwa ngamaphrotheni afanayo abizwa ngokuthi ama-capsomeres. Umongo we-virion usabalalisa ukungasebenzi, ngenkathi i-capid ihlinzeka ngokuqondile kwegciwane. Ama-prion ama-molecule wamaprotheni athelelekile angenayo i-viral DNA noma i-RNA.
Amagciwane Asembozekile vs Unqenqema
Amagciwane anemvilophini ye-lipid aziwa njengegciwane eligqokile. Imvilophu ebizwa ngokuthi yi-lipid coating ezungeza i-proteinid proteinid. Amagciwane amukela imvilophu kusuka kulwwitho lwama-host host ngesikhathi senqubo yokuhluma. Izibonelo zamagciwane afakiwe yi-SARS-CoV-2, i-HIV, i-HSV, i-SARS noma ingxibongo.
Amagciwane anqunu awanayo le imvilophu ngoba ayaphuma esitokisini ngokuyilahla. Kodwa-ke, amanye amagciwane angakha "imvilophu eyi-quasi-" efaka ngokuphelele i-capid yegciwane kodwa engenawo ama-glycoprotein wegciwane. Izibonelo zamagciwane anqunu ama-poliovirus, nodavirus, adenovirus, no-SV40.
Izinhlobo ezine zamagciwane eziphambili ze-morphological ziyahlukaniswa, okuyi-Helical, Icosahedral, Prolate, kanye ne-Envelope. Ngaphezu kwalokho kukhona okuthiwa i-virus virus morphologies.
I-morphology yegciwane ichazwa yi-capsid nesimo sayo. I-capsid yakhiwe kusuka kumaphrotheni afakwe yi-genome viral. Ijamo le-capid liyisisekelo sokuhlukahluka kwe-morphological. Amaphrotheni anekhodi enamakhompiyutha abizwa ngokuthi ama-capomers azihlangana ukuze enze i-capid, edinga ukuba khona kwe-genome yegciwane.
Amagciwane Asizayo: Amagciwane angama-Helical anefomu le-capid elingachazwa ngokuthi lingcolile noma elenziwe induku. Isimo se-helical has a patity central lapho i-nucleic acid ifakwe khona. Ngokuya ngokuhleleka kwe-capsomere, ukwakheka kwe-helical kunikeza ukuguquguquka kwegciwane lesifo noma ukuqina.
Amagciwane e-Icosahedral: I-capid yegciwane le-icosahedral iqukethe izingqimba ezifanayo (ama-capomeres) abumba oxantathu abalinganayo, bona bahlelwe ngendlela evumelanayo. Ukwakheka kwe-icosahedral kunikeza ukwakheka okuqinile kakhulu kwe-capid enikeza indawo eningi ye-nucleic acid.
Amagciwane wokuphamba: Isimo se-prolate sihlukile kwesimo se-icosahedral futhi sitholakala kuma-bacteriophages.
Amagciwane Ahlanganisiwe: Amanye amagciwane aneemvilophu eyenziwe ngama-phospholipids namaprotheni. Ukuhlanganisa imvilophu, leli gciwane lisebenzisa izingxenye zesilungu selungu lomgcini walo. Imvilophu isebenza njengejazi lokuvikela le-capsid futhi isize ngaleyo ndlela ivikele leli gciwane kusuka kumasosha omzimba okuzivikela. Imvilophu nayo ingahle ibe nama-molecule ama-receptor anika amandla leli gciwane ukubopha namaseli asezingeni futhi lihambise ukutheleleka kwamaseli. Ngakolunye uhlangothi, imvilophu yegciwane isiza ukutheleleka kwamaseli; ngakolunye uhlangothi, imvilophu yegciwane yenza leli gciwane lithambeke kalula ekufakweni okwenziwa ngabasebenzi bezemvelo, njengama-detergents (isib. insipho) aphazamisa izivimbelo zokwakha i-lipid emvilophini.
Amagciwane ayinkimbinkimbi: Igciwane eliyinkimbinkimbi linqunywa yisakhiwo se-capid esingeyona i-helical, noma icosahedra emsulwa. Ngaphezu kwalokho, amagciwane ayinkimbinkimbi angaba nezinto ezengeziwe ezinjengomsila wamaprotheni noma udonga lwangaphandle oluyinkimbinkimbi. Ama-virus amaningi we-phage ayaziwa ngesakhiwo sawo esiyinkimbinkimbi, esihlanganisa ikhanda le-icosahedral nomsila we-helical.
Izinhlobo zamagciwane zinezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zezakhi ze-genomic. Iqembu lezinhlobo zegciwane liqukethe ukwakheka kokwehlukahlukana kwe-genomic ngaphezulu kwezitshalo, izilwane, i-archaea, noma amagciwane. Kunezigidi zezinhlobo ezahlukene zamagciwane, yize kungezinhlobo ezingama-5,000 kuphela ezichazwe ngokuningiliziwe kuze kube manje. Lokhu kushiya isikhala esikhulu sokucwaninga ngegciwane elizayo.